Mai Chibwe VekwaZimuto: Munhukadzi anonzwa sei pakurhojewa?
Ndinogara ndichibvunzwa kuti pakuiswa mukadzi anohwa seiko? Chii chinohi kunakigwa? Ko manakire azvo akafanana here nemanakire anoitigwa murume?
Takambodavirazve mubvunzo wekuti mukadzi anohwa urume huchipiwa kwaari nomurume here. Takati vashoma vanohwa. Mhomho yese inongoona nemaitire emurume kuti ari kumupa urume asi hapana chaanohwa mukati
Pano tiri kubvunza kuti pakuiswa kwese nyaya yese munhukadzi anhwa sei?
Nyaya iyi haifaniri kutiendesa kure asi kungoti tihwisise kuti munhukadzi kana ari kuiswa nomurume wake waajairira waanovimba naye uye anomuhwisisa, anohwa sei ? Zvakafanana nokubvunza kuti chii chinonaka pakuiswa nomurume?
Chokutanga kuhwisisa kuti kunakigwa kweumwe noumwe munhukadzi pakuiswa kwakasiyana saka pakudavira mubvunzo uyu tinotodawo kuhwa kubva kwamuri kuti tigokwanisa kupa ma ekizamburo ezvatiri kureva. Kunakigwa kwemunhukadzi kunobva pane zvakawanda zvinoti
1. 1 Kujairirana nomurume
2. Zvinoitika murume asati apinza chombo zvichiitigwa kuti mukadzi afane kunyorova
3. Mukadzi ari kufungei akamirira kuiswa, pakumbotamba anotamba sei
4. Mukadzi ari kutya mimba here kana zvigwere nomurume waaari kuda kuisana naye uyu
5. Makaroorana here, muri kubika mapoto here, muri kungohura here, uri simoro hausi yemurume uyu here, wabhadhagwa mari kuti akuise here. Pano toda vaya vajairana chete hazvinei kuti makaroorana here kana kwete.
6. Kunonokegwa nomurume anotora nguva achikoira mukadzi wake
7. Mukadzi anokwanisa here kurerusa muviri kuti anatse kuiswa akadaro.
8. Mukadzi ari kuiswa maisigwe api kana kuti murume ari pamusoro kana kuti sei?
9. Mukadzi anosvika pakuita ORGASM here nokuiswa kwake ipapo
Tobva tatohwisisa kuti kunaka kwazvo kwakasiyana imwe neimwe nguva yazvinoitika pamunhu umwe iyeye.
Tapfuura kwese uku mukadzi ava kutoiswa, anohwa chii pazviri. Kune vasikana vasina kumboiswa (mhandara) vanoda kuhwisisa kuti zvinombonaka seiko? Koitavo varume, chero murume wako chaiye anongodavo kuhwisisa kuti pakukuisa ipapo unombohwa Seiko, nokuti iye ane mahwire akewo akatosiyana neako. Vakadzi vakawanda havaudzi varume manakire azvo nokuti varume havanatsi kuziva kuti vobvunza sei mubvunzo wacho.
Saka ngatichienda mberi nokuti kuiswa kuita sei uye unohwa sei?
Kutanga nokubatwa batwa muviri nomurume: Pane nengo dzomuviri dzinoti ukabatwabatwa noumwe munhu, zvikuru murume (vamwe vanoda vakadzivo) unohwa muviri uchidavira kuzasi kuchiti nyevenyeve nyeve wosaziva kuti uri kusekenyedzwa here kana kwete asi unohwa muviri wese uchida kuti zvirambe zvichiitika.
Ukazobatwa batwa kubhinzi uko nokupurudzigwa zvidya nematinji, unongoona wega wowedzera kuvhura makumbo kuti murume arambe achiita. Akazomwa minyatso yemazamu, uku achipurudzira achindosvika kubhinzi achipurudzira achitevedzera kwauri kumusundira ruoko gwake achindopurudzirako, pamwe unotoerekana watsinzina maziso kuti fungwa itevera zviri kuitika.
Unohwa kunyorova nokuzvimbirira kwekuzasi. Pamwe ungada kuti murume apote achipinza chigumwe mukati mako. Kana usina kumbopinzwa chinhu mukati uri mhandara ndipo patinoda kuti zvinohwikwa kudii kwazvo?
Chokutanga unohwa kubitirigwa (Overwhelming URGE) nokuda kupinzwa chombo kana chigumwe. Unongohwa kuti kuda kwauri kuita kuti upinzwe kwakurira fungwa. Pamwe kana murume wako ari pafungwa yokumbotama newe anokwanisakuit nguva ari pamatinji nebhinzi. Pamwe anotokwiza matinji nebhinzi achizvikwiza nemaoko kana kuti nechombo chimire. Zvinowedzera kuti ude kuiswa.
Matinji anonyorova ozvimbirira oda kubatwa batwa, Bhinzi inomira sezvinongoitawo chombo pamurume asi kungoti bhinzi idikidiki zvokuti inoti pamwe haionekeri kumira. Murume anotoita zvokuikwizirira nemimwe yake kuti ahwe kuti yamira. Iyo bhinzi yacho inonakachose kukwizirigwa asi pamwe haidi kuikwizirira iriyo asi nyamwa dzakaitenderedza.
Kupinzwa muchitubu kana murume achihwisisa mapinzire, kune vanhukadzi vakawanda vanoti nguva yokupinda kwechombo muchitubu iyoyo dikidiki yacho nguva iyoyo, inonaka zvisingatauriki kuhwa chombo chichipinda. Saka udza murume asangoita seari kukanda pfumo asi kupinza zvishoma nezvishoma zvinomisa kufema uchihwa achipinda.
Kuzvimbirira kuya kwawaita kuzasi kunoreva kuti chitubu chazvimirira zvese nomukati. Madziro emukati anatsa kubatana. Murume achipinda anopatsanura madziro emukati zvokuti unohwa achipinda.
Wega unoerekana wosimudzira chiuno kuti murume anatse kupinda. Unohwa muviri kuti zharara kubvuma kupindwa kusvika nokutsoka uko kuda kuwedzera kupindwa. Kana wajairana nomurume wako unoerekana watobatirira kuti murume asambokwanisa kubudapo asi arambe ari mukati. Kufema mweya kunotochinja. Hana inowedzera kutinhura, minyatso twii, ganda romuviri kutoshinya chiuno kuti uchireruse zvonetsa. Zemo muviri wese nefungwa.
Kana wange usina kumbopinzwa chombo usaverenga pano. Enda kwakahi (Kana wafunga kubviswa humhandara)
Toti murume ava mukati mukadzi anohwa sei?
Kazhinji zvinonaka chose zvokuti unotoda kuramba uchikoigwa nomurume asi manakire azvo anononoka chose kuitisa ORGASM kuvakadzi vakawanda. Kune vashoma vanokwanisa kuita Orgasm nazvo. Chinoitisa zvinake asi zvisinganyanyi ingari yokuti chombo hachikwizi bhinzi. Kupinzwa kunonaka asi bhinzi iri mberi chose. Asi zvadaro vakadzi vakawanda vanofarira manakire azvo zvokusvika pakuda kuti dai murume aramba achingokoira.
Kusvetwa kana kunazvwa bhinzi:
Chiito ichi chinonaka zvisingaiti uye chinokasirisa kuitisa ORGASM. Zvinoda kuti murume ashandise rurimi, muromo (LIPS) uye kufemerapo mweya wake unodziya. Vanhukadzi vakawanda vanoti zvinonaka chose chose asi kune vakadzi vasinazvidi zvachose. Iwe zviri kwauri kuti unohwa zvichinaka sei.
Kusveta/kumwa chombo chomurume kunoita uhwe sei pazviri? Vakawanda vanogarozviita vanowirirana kuti manakire azvo anobva pakuongorora murume achinakigwa nazvo uye kuziva kuti uri kunakira murume wako. Kunge uriwe uri kushandisa chombo kunofadza. Asi mahwire aunoita zvinobva nokuti uri kuitei nechombo. Kumunhukadzi kungova nechomo mukati mako chinhu chinofadza.
Tozoti wakoigwa kusvika pakuita ORGASM (kutunda kwemukadzi)
Unohwa sei? Hazvikwanisiki kutsanangura kuti mukadzi anohwa sei panguva iyi nokuti pane zvakawanda zvinoitika zvisingatauriki zviakakwana asi kungoti iko zvimwe zvezvinoitika ndeizvi.
Unohwa kuita unga kuwanzotangira pabhinzi nguva zhinji kana mukati mechitubu dzimwe nguva. Pamwe zvinotangira kushoka zvokwira nemakumbo zvochisunga chiuno nomusana. Ipapo chero ukasvinura maziso haunatsi kuona zvakanaka kwekanguva kakati. Musoro unotenderera woita seunne dzungu. Nyika yese inotenderera seuri pamuzeerere uye sewabatwa nechidzimira. Unohwa muviri kuchukuchwa kuita seuri pa tarakita iri kufamba pazhira yakaipa.
Kufema haukwanisi, kuminya mate haukwanisi saka pahuro panotooma, mhepo muchifuva yoita shoma. Mukati mechitubu munoita ma SPASM anotangira mukati achisvika pakati pese pemakumbo kusvika muzvidya nomudumbu mese nomusana. Kana wakambobatwa nemagetsi, kutyisa kwazvo kwakada kufanana. Kune vamwe vanofenda zvokutomboita nguva akati zii.
Zvinosvika mufungwa mese uyepaunozogona kufema mweya unohwa hana kurova zvinotyisa. Asizve tadaro tinoona kuti maitikire azvo haana kufanana. Pamwe unotombofunga kuti wava kufa pamwe unongoona chiri chiitiko chemazuva ese.Pamwe unoita chidzimira nyika yese yoita seiri kutenderera. Zvino ndirini ndoita nyota yemvura yakawanda. Pamwe zhara yezvokudya futi.
Kana murume ange asina kukupa urume, ukamutangira iye akaramba achikukoira iri pakati pekuita Orgasm yako, unokwanisazve kutana imwe igoramba ichiitika. Zvinonetsa kutsanangura kuti munhu anohwa sei pazviri.
Kune nyaya yokurarira. Vamwe vanonakigwa nayo zvokuti vanotoshusha varume vavo kugaizviita asi zvinonetsa kuita. Kurarira kunoitwa nomukadzi nomurume pakunovata paya vakapedza kuisana, murume akambozorora, anokwanisazve kumisa chombo asi pamwe chisina kusimba zvokukwanisa kuvatazve nomukadzi.
Vanokwanisa kuti mukadzi ofuratira murume osimudzira gumbo akaita sokukotama, murume okwanisa kupinza chombo vovata vakadaro. Murume akangojaira tsika iyi, chombo chinongopota chichimra chiri mukati vese vavete. Mukadzi anopepuswa nokushinya shinya chombo kwechitubu chake zvinova zvinonaka chose uye zvinoitisa vamwe vakawanda vanozviita Orgasm. Koitikazve kuti zvinokonzera kujairana nomurume wako. Asi pamwe munobatwa nehope makapindana mozopepuka musina kupindana. Tsika yokurarira inonaka asi inoda kudzidza nokujaira.
Pamwe munoita hope murume ari pamusoro kana kuti mukadzi ari pamusoro. Kana mazvijaira anenge ari pamusoro anozvisapota nemagokora pa PILLOW padive peari pasi.
Kune zvimwewo zvatisina kutsangangura pano zvinoitika muupenyu hwevanhukadzi. Chokutanga kuva munhu asingadi mimba asi kuiswa achida. Kune vasikana vanoudza murume kuti kana achida kumuisa ngaapinze kushure chaiko kuti asaita mimba uye kuti asabva humhandara. Kunyika dzinokoshesa humhandara zvinoitika chose. Kuti musikana anohwa sei achiiswa kushure zvinohi kune vamwe zvinogwadza, kune vazvijaira zvinonetsa kurerusa muviri asi kana akarerusa muviri zvinoita nani.
Saka wako chaiye mukadzi anohwa sei pakuisana kwenyu?
Chikuru kujaidzana kuti mapedza paya kana kuti mangwana moita nyaya pazviri. Mohwisisana kuti zvange zvakadii . Murume ohwisisa, mukadzi atsanangura kuti anohwa sei uye anofarira zvipi. Kuti wakamboona mukadzi achinakigwa neizvi, wofunga kuti uyu wawava naye achanakigwavo nazvo bodo. Vakadzi vakasiyana.
Varume hwisisaizve kuti vakadzi vakawandisa vanofarira kuvata nevarume vavo. Imi varume ndimi munoona sokuti kunakira vakadzi venhu chinhu chisina kukosha, kusvika mukadzi angoona sokuti hauzvikoshesi obva angozvisiyawo zvakadaro Tohwa motizve mukadzi ane unyope hwebonde. Bodo unyope ndimi munohuunza mumba. Usajaira kungovata mukadzi wako asina kukutaridza kuti aguta. Ipa mukadzi zemo, ugomunonokera agutewo.
Sezvataona, inyaya inonetsa chose kutsanangura nokuti umwe noumwe ane manakirigwe ake akatosiyana neeumwe uye pamunhu umwe chete hazvinaki zvakafanana zuva nezuva. Zvinobva nokuti muri kuitai pauviri hwenyu uye iwe mukadzi uri kufungei pakuvatana kwenyu nguva iyoyo.
Kana pane zvaunoda kutaura taura hako pano tidzidzewo zvimwe.
Posted by Mai E Chibwe at 16:31
Kuiswa nemukomana ane condom kwakasiyanei nokuti asina? Tiri kushandisa macondom nguva dzese. Zvakasiyanei?
Kumunhukadzi hazvina kusiyana asi kungoti kana mukashandisa makondomu akati korei murume anokwanisa kunonoka kukudiridzira saka zvinoita nguva achikunakira chinova chinhu chakanaka pabasa iri. Asi kungoti hauiti mimba kusvika wava kuda mimba, uye haubati chigwere kana murume wawavata naye ane chigwere chechihure. Haupi murume chigwere kane une chigwere chechihure.
Kumurume zvinoita sokuti siyano ishoma asi kungoti anofadzwawo nokugwisisa kuti anokunakira. Asi kune varume fuza vasina basa nokuti mukadzi anakigwa here kana kwete saka kumurume akadai hapana siyano.
Kushandisa makondom chinhu chakanaka chose zvikuru kune vanofarira kuvatana vasina kuroorana, zvinova zvinoitwa nevakawanda mukore uno.
Hevoi Mai Chibwe
Ndine mibvunzo miviri inoti:
1. Vamwe vanoti kana mapedza bonde mudzimai anofanirwa kunoita weti kuti adzivirire kubatwa nema UTI. Ndizvo here?
2. Kana mukashanyirwa nevanyarikani vanenge ana Baba, zvinoreva here kuti munombomira zvepabonde. Zvinhu zvinogamuchirika here kuti muite zvebonde imi miune vaenzi?
24 February 2017 at 02:58
Ndapindura mibvunzo yese ku Mibvunzo neMhunduro 8
Q 49 and Q50.
Ndazama kutsanangura nyaya dzese dziri mbiri.